Mety lany bateria ny findainao noho ny maripana ambany indrindra | Androidsis
Fampitandremana ho an'ireo tantsambo: ny hafanana ambany dia ambany dia "mampangatsiaka" ny baterinao finday; hazavainay ny antony
Manuel Ramirez | | bateria, About us, Tutorials
Amin'izao andro izao rehefa manapaka firaketana ambany mari-pana isika, tadidio fa ny bateria avy amin'ny findainao dia mety hanjavona saika anaty jiffy noho ny haitao ananany. Midika izany fa rehefa mandalo 15 degre ambanin'ny zero ianao dia mitandrema raha mila mampiasa findainao ianao.
Tsy ianao no ho voalohany handoa ny findainao 100% handeha hanao dia lavitra miaraka amin'ny maripana ambany dia ambany, ary rehefa mila mampiasa GPS hahatrarana ny toerana misy anao ianao, tampoka dia hitanao fa novonoina tsy nisy bateria ny findainao ary tsy nisy famerenam-bola raha tsy mijanona eo amin'ny tobin-tsolika na tobin-tsolika manaraka ianao.
1 Fa maninona no mandeha haingana be ny bateria?
2 Aza sarotiny amin'ny finday ambany be ny findainao na efa "nivaingana"
Fa maninona no mandeha haingana be ny bateria?
Ka mba mifankahazo haingana isika, ny Ny teknolojia bateria lithium-ion amin'izao fotoana izao dia miankina amina andianà fanehoan-kevitra simika ka miasa izy ireo. Ireo maripana ambany be ireo no mampihena na "mihamangatsiaka" ireo fanehoan-kevitra ireo.
Raha ny marina, ny telefaona sasany toa an'i Samsung, na ny Galaxy Note10 + aza, voalaza ao amin'ny tatitra momba ny fikojakojana, ary mifandraika amin'ny ora famandrihana, fa izy io dia miasa tsara indrindra raha eo anelanelan'ny 10 sy 40 degre ny mari-pana.
Raha mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny simia izay miaina ao amin'ny bateria lithium-ion izay ampiasaintsika rehetra amin'ny finday isika, ny Mivoaka ny famoahana bateria rehefa mihetsika ny ion-lithium amin'ny alàlan'ny vahaolana avy amin'ny ilan'ny faran'ny batterie, izay mety ho ny anode, mankamin'ny ilany hafa ary izay fantatra amin'ny hoe cathode. Rehefa tapitra tanteraka ny bateria dia tafiditra ao anaty «anode» avokoa ireo ions rehetra.
Ny zavatra mahatsikaiky amin'ity rehetra ity dia izany ny antony manimba ny sery dia mbola tsy fantatra bateria. Tamin'ny taona 2011, ekipa injenieran'ny bateria no nitatitra tao amin'ny Journal of The Electrochemical Society (gazety iray manokana momba ny sehatry ny siansa sy ny haitao electrochemical) fa ny mekanisma izay misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny karazan'ity bateria ity dia mbola tsy fantatra.
Aza sarotiny amin'ny finday ambany be ny findainao na efa "nivaingana"
Raha izao isika no eo amin'ilay toerana no nanazava kely amin'ny antsipiriany momba ny fomba fahitana ireo ion rehetra ankehitriny eo anilan'ny batery izay antsointsika hoe cathode, aza mieritreritra ny hanandrana hampiditra azy akorysatria mety tsy hahomby tampoka ny fizotry ny fampidinana.
Eto ny tokony hataontsika dia ny manana faharetana kely ary ento ny telefaona amin'ny toerana na toerana misy mari-pana ambany. Amin'ny fomba mahagaga, ny baterian'ny findaintsika dia hiverina amin'ny toetrany voajanahary izay manana karama isan-jato mitovy.
Stephen J. Harris, mpahay simia ao amin'ny Laboratoara Nasionaly Lawrence Berkeley, ambanin'ny toetry ny mari-pana ara-dalàna, amin'ny alàlan'ny fampidirana onja elektrika na Ny famindrana amin'ny bateria dia "hitondra" ny ion hiverina ao anaty pores amin'ny grafit an'ny anoda. Fa rehefa ny bateria dia andao hiteny hoe "mangatsiaka", ireo ion ireo dia tsy afaka miditra amin'ny grafita ary mivoaka amin'ny vahaolana handrakofana ny velaran'ny grafita ho toy ny lithium mafy.
Raha izao isika dia manandrana mameno ny telefaona finday amin'izay fotoana izay, miaraka amin'ny bateria "nivaingana", ny Mety hanimba ny zava-bita sy ny fiainana ny fizotrany bateria.
Izany dia, ary ny mifankahazo mora kokoa, rehefa ny baterian'ny miverina amin'ny mari-pana ara-dalàna ny findaintsika, hiverina any amin'ny toerany ireo "ion" ary ny isan-jaton'ny enta-mavesatra dia miverina amin'ny fanjakany.
toy izany raha mila ny findainao ianao handehananao amin'io zotra io tianao haleha miaraka amin'ireo tontolon'ny ranomandry rehetra ireo, ary ilainao izany hahafahanao mametraka ny tenanao, mieritreritra indroa; Indrindra raha mandeha amin'ny faritra mihoatra ny 15 degre Celsius ambanin'ny zero ianao; Aza adino ity fampianarana momba ny fanadiovana ny findainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fampitandremana ho an'ireo tantsambo: ny hafanana ambany dia ambany dia "mampangatsiaka" ny baterinao finday; hazavainay ny antony
Ahoana ny fomba hampiasana ny Google Assistant ao amin'ny Google Chrome